जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धि अन्तिम बहस आज;निर्वाचन आयोगलाई कसलाई देला ? - लाल बिहानी
जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धि अन्तिम बहस आज;निर्वाचन आयोगलाई कसलाई देला ?
७ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को आधिकारितासम्बन्धी विवादको अन्तिम बहस आज हुँदैछ । विवादित दलका पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि आफ्नो दावी पेश गरेका थिए ।
आयोगले सो विवादको निरुपणका लागि इजलास गठन गरी साउन ३ गतेदेखि निरन्तर बहस चलाइरहेको छ । पहिलो चरणको बहस सकिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आआफ्नो सक्कल प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।